Madaxwayne Geele oo Aqbalay Guuldarada siyaasadeed ee ku Habsatay. | ogaden24
Madaxwayne Geele oo Aqbalay Guuldarada siyaasadeed ee ku Habsatay.
Isbadalada Xawliga kusocda ee Geeska Africa Hirgalay 5-tii bilood ee lasoo dhaafay uuna Gadh-wadeenka kayahay Ra’iisal wasaraha Itobiya, ayaa dhulka lagashay siyaasadii Gabowday ee kudhisnayd macangag-nimada iyo xukunka Jacaylka ee madaxwayne Ismaciil Cumar Geele.
Madaxwayne Geele oo xidhiidh iskudanaysi ah oo dhinacya badan uu kala dhexeeyay kooxdii TPLF ee Talada Itobiya laga Fara-maroojiyay, ayaa ku Guul-daraystay inuu Fahmo Jahada cusub ee siyaasada Geesku u Jan-jeedhsatay, kadib markii Abiy Ahmed uu dhamaan xididada u siibay Haykalkii siyaasadeed ee kooxda TPLF mudada dheer ku caana maalaysay.
Madaxwayne Geele waxaa kooxdii TPLF kala dhexeeyay iskaashi dhinaca amaanka ah oo Gaadhsiisan Heer difaac iyo sidoo kalana dekada Jabuuti ahayd Isha ugu wayn ee Itobiya wax usoo maraan kana dhoofsato, balse madaxwayne Geele waxaa isu raac-raacay Guuldaroyin siyaasadeed kadib markii uu si Indho la’aan ah u Taageeray Isbahaysiga Sucuudiga ee dawlada Qatar Go’domiyay.
Taageeradii Sucuudiga waxay Horseeday in ciidamadii Nabad ilaalinta ee Qatar ay 3-maalin Gudahood kaga baxaan fadhiisimihii ay kulahaayeen Buuralayda Dumayra oo ay iskuhaysteen Eritrea iyo Jabuuti, waxaana isla daqiiqadihii ay ciidanka Qatar baxeen dhamaan dhulkii lagu muransanaa lawareegay ciidamada Eritrea.
Madaxwayne Geele isaga oo lajahawareersan dhacdadii Dumayra ayaa Ra’iisal wasare Abiy Barqo kadagay magalada Asmara, waxaanu Qalinka kuduugay dhamaan dalabaadkii Eritrea, sidoo kalana waxaa uu ka Hawlgalay in cunaqabataynta laga Qaado dalka Eritrea, taasi oo dharbaaxo Lama Filaana kunoqotay madaxwayne Geele iyo mamulkiisa.
Balse waxaa Jabuuti dhul Gariir kunoqotay kadib markii bil kadib uu madaxwayne Farmaajo Qaaday Wadadii Abiy Axmed booqasho 3-maalmood ah oo Asmara uu kutagayna waxaa kasoo baxday Natiijo Jabuuti Quus iyo Rajo beel u xambaarisay kadib markii Farmaajo shuruud la’aan codkiisa kubiiriyay kii Abiy ee ahaa in Eritrea laga Qaado cunaqabataynta mudada dheer saarayd.
Dhacdada kale ee madaxwayne Geele Gaadhsiisay Heer Geeridu Nolosha u dhaanto ayaa ah Heshiiska 3-Geesoodka ah ee Farmaajo Abiy iyo Afwerki ay Qalinka kuwada duugeen, waxaana Heshiiskani uu Gabi ahaan meesha kasaarayaa muhiimadii Istaraatiijiyadeed ee dalka Jabuuti, Gaar ahaan xidhiidhkii Ganacsi ee Itobiya oo durba u weecday dhinaca dekadaha Musawac iyo Casab oo Markabkii ugu Horeeyay 20-sano kadib uu Haatan Halkaasi kuxidhan yahay.
Hadaba madaxwayne Geele ayaa Indhihiisa oo shana waxaa ka Lug-meersaday 42-Jirka Oromka ah kaasi oo isla shalay wafdi bah-dilaad ah oo ka kooban 3-da wasiir Arima dibadeed ee Itobiya, Somaaliya iyo Eritrea u diray Jabuuti, waxayna Talaaboyinkaasi oo madaxwayne Geele u xambaariyeen Guul-daro siyaasadeed tii ugu foosha xumaad ee Qarnigan 21-aad ku Habsatay Hogaamiye Talada dalkiisa Haya.